IShandong Hualu Home Furnishing Technology Co., Ltd.iyinkampani ephethwe yiShandong Huajian Aluminium Group. Isungulwe ngo-2017, iyinkampani ehlanganisa ukwakheka nocwaningo kanye nokuthuthukiswa kwamaphrofayli asendlini, amaphrofayili wokuhlobisa kanye nezinsiza, inqubo yokwenziwa okujwayelekile, ukuqeqeshwa kokwakhiwa nokuholwa, ukuthengiswa kwezimakethe kanye nokuphakanyiswa komkhiqizo Ibhizinisi elihlanganisiwe lokuxhasa nokucubungula i-aluminium home system enezinsizakalo.
Amaphrofayli Ejwayelekile e-Aluminium
Iwindi le-Aluminium alloy lisetshenziswa kakhulu emkhakheni wobunjiniyela bokwakha ngenxa yobuhle bayo, ukubekwa uphawu namandla aphezulu.Ngemva kokwelashwa kwendawo, iphrofayili ye-aluminium alloy iyakhanya futhi iyacwebezela, ikhombisa imibala nemiphumela ehlukile.
I-Thermal Break Aluminium Window & Umnyango
Ubuwazi ukuthi amaphrofayili ekhefu elishisayo abengasetshenziswa kakhulu eminyakeni eyishumi? Ngenxa yezinkampani ezinjengeHuajian Technologies, imishini edingekayo ukucubungula amaphrofayili ekhefu elishisayo manje isiyatholakala kabanzi. Kepha yini ngempela ikhefu elishisayo, futhi kungani kuyizindaba ezinkulu kangaka?
Iphrofayli yewindi nomnyango we-aluminium
I-Shandong EOSS Windows & Doors System Technology Co .. Ltd ingeyeShandong Huajian Aluminium Group Co, Ltd, isebenza kakhulu ekwakhiweni kwamawindi, iminyango namakhethini odonga amasistimu nezinsimbi zokwakha, ukukhiqiza, ukuthengisa nokufaka, e- ezentengiselwano, ukuthuthukiswa kwesoftware, ukuthengisa kanye nenkonzo.Inkampani ye-EOSS iqoqa unjiniyela osezingeni eliphakeme waseChina emkhakheni weFenestration.
I-Aluminium Form Plate Work
Njengefomu lokwakha elisha eminyakeni yamuva nje, ukwakhiwa kwe-aluminium formwork kungabonakala emazweni athuthukile emhlabeni, iphakeme kunethempulethi yendabuko ngezinto ezibonakalayo, umphumela wokwakha, isabelomali sezindleko, impilo yensizakalo, ukuvikelwa kwemvelo njalonjalo. Ngasikhathi sinye, inganciphisa izindleko zephrojekthi, ithuthukise ikhwalithi yobunjiniyela, isheshise isikhathi sokwakha futhi igweme iphutha lomuntu enqubeni yokwakha, ngemuva kokususwa kwebhodi ngaphandle kwemfucuza yobunjiniyela obuyinsalela, ukuhlinzeka okuphephile futhi indawo yokusebenza ephucukile yezisebenzi zokwakha.